नेकपा फुट्यो ! आधिकारिक घोषणा मात्र बाँकी ? « Post Khabar
Published on: 19 November, 2020 11:09 am
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सचिवालय बैठकका सदस्यलाई गरेको सम्बोधनको भाषालाई मिहिनरुपले विश्लेषण गर्ने हो भने सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को विभाजनको संघारमा पुगेको अर्थ लगाउन सकिन्छ।
नेकपाका दोस्रो नम्बरका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पहिलो वरियताका अध्यक्ष माथि आरोप लगाउँदै प्रस्तुत गरेको प्रस्तावलाई अभियोग पत्रको संज्ञा दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त अभियोग पत्रले पार्टी विभाजनको विजारोपण गरि सकेको बताएका छन। “अस्तिको प्रस्ताव नामक अभियोगपत्र आइसकेपछि यसअघिका हाम्रा सहमति, समझदारीको त त्यसैले अन्त्यको घोषणा गर्यो । त्यो पत्र बन्नुभन्दा पछि पुराना सहमति कायमै छन् भन्ने कुरा रहेन । अब पुराना सहमति कायम रहेको अवस्था नरहेको हुनाले एउटा नयाँ निकास पार्टीले खोज्यो । हामीले एउटा नयाँ निकास खोज्नैपर्छ” प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा भनिएको छ।
अभियोग पत्रमा बहस गर्न तयारी नपुगेको कारणले बहस नभएता पनि उक्त आरोपमा छिनोफानो नभई बैठक अघि बढ्न सक्ने प्रधानमन्त्रीको जिकिर रहेको छ। “आज म त्यो लाञ्छना पत्र, जो मलाई दिइएको थियो, त्यस पत्रका सम्पूर्ण आरोप, अभियोग, लाञ्छना, तिरस्कार, अपमान सबै खारेज गर्छु । यो मेरो राजनीतिक जीवन नै सिध्याउने गरी ल्याइएको आरोप पत्रलाई म पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्छु । त्यसको यथोचित जवाफ म लिखित रूपमा नै प्रस्तुत गर्नेछु” सम्बोधनमा भनिएको छ।
साथै झुठा र निकृष्ट लाञ्छना आरोपहरु नसहने प्रधानमन्त्रीले सचिवालय सदस्यलाई बताएका छन। अभियोग पत्रका आरोपहरु सहि छ भने अभियुक्त हट्नु पर्ने र आरोपहरु असत्य छन भने आरोप लगाउने हट्नु पर्ने प्रधानमन्त्रीको जिकिर छ।
आफुले उक्त अभियोग पत्रले पार्टी गम्भीर मोडमा पुगेको बताए पनि बरिष्ठ नेता माधव नेपालले धम्क्याएको अर्थमा बुझेको सम्बोधनमा उल्लेख छ। “मैले त्यो पत्रले परिस्थिति अलिक गम्भीर मोडमा पुर्यायो भनेर माधव कमरेडलाई भनेँ । उहाँले अँ धम्क्याउने? धम्क्याएर कोही डराउँदैन भन्नुभयो । अब डराउने खालको त यहाँ कोही छ जस्तो लाग्दैन । माधव कमरेड मात्रै नडराउने होइनन्, अरू पनि कोही डराउलान् जस्तो लाग्दैन । कोही पनि डराउँदैनन् । यस्तै राजनीति गरेर आएका मान्छे कोही डराउलान् जस्तो लाग्दैन ।”
“राजनीतिमा जुनसुकै कुरा आइपरे पनि सहन हुनुपर्ने नै हुन्छ रु म त जेलनेल, कुटाइ, यातना सबै भोगेर आएको छु । लाठी, बुट, जुत्ता मैले भोगेर आएको छु । ती सबै कुरा भोगिएको छ भने अँ, फेरि पनि कुनै परिस्थिति भोग्न मलाई कुनै कठिनाइ छैन । त्यो पत्रका प्रस्तोता र त्यसको पृष्ठभूमिमा रहेका साथीले कुन बाटोबाट जाने च्वाइस गर्नुस्” सम्बोधनमा कित्ताकाट गरेर अघि बढ्न भनिएको छ।
तर सम्बोधनमा पार्टी एकताको बचाउन सकिने सम्भावनाको समेत उल्लेख छ। “सबै शूरैशूरा हुँदा शूरै चाहिँ बुद्धिमत्तापूर्ण कति हुन्छ र कति हुँदैन? फेरि पनि विचार गर्न मेरो आग्रह छ” सम्बोधनमा भनिएको छ।